Sherlock Holmes: Akụkọ nke Genius Na-ata Ahụhụ. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Sherlock Holmes: Akụkọ nke Genius Na-ata Ahụhụ.
Ana Lena Rivera Muniz | | Black akwụkwọ
Sherlock Holmes, onye nchọpụta kachasị ama site na okike ya ruo ugbu a.
Sherlock Holmes Ọ bụghị onye mbụ nyocha na akwụkwọ, (Dupin. Edgar Allan Poe), ọbụnadị ndị na-ere ere (Poirot. Agatha Christie), mana o doro anya na ọ gbadara n'akụkọ ihe mere eme dị ka eọ kasị mara amara akụkọ ifo niile oge.
Sherlock nọ onye kere ya kpọrọ asị, Arthur Conan Doyle, maka ikpuchi akwụkwọ ndị ọzọ o dere nke o lere anya dị ka mma, ọ bụ ezie na ndị nkatọ ekwenyeghị ya. Conan Doyle gbalịrị igbu ya, o mere ma kpọlite ​​ya n'ọnwụ n'ihi mgbanwe nke ọnwụ ya mere n'etiti ndị na-achọ ịmata ihe. Mama Conan Doyle gbalịsiri ike ime nwa ya ka ọ ghara igbu Holmes. Bụlagodi, Sherlock Holmes nwụrụ afọ 10 tupu onye edemede ya, Conan Doyle, kwetara ịkpọlite ​​ya.
1 A mụrụ Sherlock Holmes.
2 Ndụ Holmes.
3 Ihe ọchị banyere nnukwu onye nyocha.
A mụrụ Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes mụrụ na magazin, The Beeton's Christmas Annual, ma mee nke a site na iweta achịcha n'okpuru aka ya maka Conan Doyle, bụ onye dara ego iji nweta ndụ dịka dọkịta, mana ozugbo ọ gbasara ndị ọha na eze na onye nyocha ya.
E mere Sherlock Holmes baptizim Sherrington Hope na ụdị nke mbụ. Site ebe ahụ ọ gara Sherrinford Holmes na n'ikpeazụ Conan Doyle biri na Sherlock Holmes.
The Adventures nke Sherlock Holmes ebipụtara ha n'akwụkwọ akụkọ, na The Strand Magazin, na usoro nnyefe, Nhazi usoro nke usoro telivishọn dị ugbu a.
Sherlock Holmes ekwughi okwu a Elemental, ezigbo Watson. Nkebi ahịrịokwu ahụ bụ ikikere ọrụ nka maka otu n'ime fim ya, nke dịrịrịrị na narị afọ nke XNUMX.
Holmes mesoro ezigbo enyi ya na onye inyeaka, Dr. Watson, nlelị na enweghị isi, n'agbanyeghị ekele miri emi o nwere maka ya, ikekwe naanị onye onye nyocha nwere mmetụta ọ bụla na-ahụ n'anya.
Holmes bụ cocaine na morphine riri ahụ, ọgwụ ndị nyeere ya aka ịkwụsị ịna-agwụ ya ike. Iji tinye uche ya na ya ikwusi, nwere Stradivari.
Sherlock nwere a nwanne nwoke aha ya bụ Mycroftonye nwere ọgụgụ isi karịa ya, onye na-arụrụ gọọmentị Britain ọrụ ma were ọrụ nwanne ya nwoke ka ọ bụrụ ihe omume ntụrụndụ. Holmes nwere mmasị na nwanne ya nwoke nke tọrọ ya, n'agbanyeghị na ọ na-eche na ọ na-ala ọgụgụ isi ya n'iyi n'usoro n'ije ozi nke obodo ya, eziokwu bụ na ọ maara onwe ya n'akụkụ ya.
Aha m bụ Sherlock Holmes. Ọrụ m bụ ịmata ihe ndị mmadụ amaghị. " (The-acha anụnụ anụnụ carbuncle)
Nchọpụta ya bụ Prọfesọ Moriarty, onye echiche ojoo di iche iche dika nke Sherlock. Moriarty anwụ na Reichenbach Falls na Sherlock Holmes. Ihe dị iche bụ na Moriarty Agaghị m akpọlite ​​ọzọ. O nweghi otutu ndi ozo dika onye nyocha.
Ihe ọchị banyere nnukwu onye nyocha.
Holmes biri n'okporo ámá Ugwu Baker Street 221B. Okporo ámá dị adị, ma ọ rughị ọnụ ọgụgụ ahụ. Mgbe ọ bịarutere, mgbe onye uwe ojii na onye okike ya nwụsịrị, na 1932, etinyere ụlọ akụ na adreesị ahụ, Abbey National Building Society, nke ga-akwụ mmadụ ụgwọ iji zaghachi ọtụtụ akwụkwọ ozi bịarutere maka onye nyocha ahụ.
Ọ bụ nke nọchitere anya na fim na telivishọn site n'aka ndị na-eme ihe onyonyo nke Robert Downey Jr. na nso nso a, nke Benedict Cumberbatch. Na nsụgharị mbụ ya, Elementary, Dr Watson bụ nwanyị, Joan Watson, nke Lucy Liu na-egwuri egwu.
Sherlock Holmes: Oge Na-adịghị Oge Maka Ndụ Ndụ Akwụkwọ Na-adịghị Anya.
Sherlock Holmes nwere obere akwukwo edemede jiri ya tụnyere ndị ọzọ chepụtara echepụta: akwụkwọ akụkọ 4 na obere akụkọ 56 ma e jiri ya tụnyere 78 nke Commissioner Maigret ma ọ bụ 41 nke Hercules Poirot dere.
Imirikiti ihe omimi ya ndị Dr Watson kwuru, gụnyere nke ikpeazụ na 1927, afọ atọ tupu Conan Doyle anwụ: Sherlock Holmes faịlụ.
Sherlock Holmes dabere na onye nkuzi onye kuziri Conan Doyle na mahadum nke ogwu, Joseph Bell, bụ onye masịrị ụmụ akwụkwọ na klas na ikike iwepụ ya. NAs bụ isi iyi nke mmụọ nsọ maka ụlọ Dr, protagonist nke telivishọn usoro na-aza aha ya.
N'ụzọ dị ịtụnanya Ọrụ Conan Doyle kachasị ọhụrụ (Abis nke Maracot. 1929) kpakpando na Sherlock Holmes.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Black akwụkwọ » Sherlock Holmes: Akụkọ nke Genius Na-ata Ahụhụ.
Isiokwu na-akpali. Naanị otu mana, nke ọ maara, kwuru banyere ọrụ 41 nke Hercule Poirot bụ n'ezie akwụkwọ yana ebe e jiri ya tụnyere Sherlock Holmes ịmata ọdịiche dị n'etiti akwụkwọ akụkọ na akụkọ, ekwesiri ịkọwapụta na onye nyocha Belgium nọ na akwụkwọ akụkọ 33 na akụkọ 54. (56 Ọ bụrụ na anyị agbakwunye akwụkwọ abụọ a na-ebipụtabeghị nke John Curran bipụtara na ọrụ ya 'Akwụkwọ Ntuzi Nzuzo' nke Agatha Christie dere nakwa na ha bụ n'ezie ụdị dị iche iche ederede abụọ edepụtarala na ọ bụrụ na onye dere ha tụfuru ha, mgbe enwere ike bipụtara ya ihe kpatara na ekwesighi iburu ha n'uche).
Ana Lena Rivera kwuru dijo
Nkọwa doro anya! Daalụ.
Zaghachi Ana Lena Rivera
Akwụkwọ Europe kacha mma
Goethe. Icheta nna nke German Romanticism